Ny Firenena No Atao Fitaratra : Fandalinan’ny Kôlômbiana Iray Ao Bristol · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Oktobra 2015 16:45 GMT
Ity no fihaonana faharoa amin'ilay andianà antsafa itrandrahana ireo zavatra iainan'ny Amerikàna Latina izay mandao ny firenena niaviany hikatsaka fomba fiaina vaovao sy mijery ny tany afàrany, miaraka aminà hevitra hafa. Ao anatin'ity lahatsoratra ity i Ana Hernández dia miresaka amin'i Pablo Uribe, tanora Kôlômbiana mpahay politika, nahazo ny zompirenena Espaniôla sady nisafidy koa an'i Bristol ho toerana fonenana.. Antsafa niarahana taminà Dômonikana mpivarotra, monina ao Espaina no voalohany , izay azonareo vakiana ato.
Pablo Uribe, sry nopihan'ny mpanoratra tao Bristol (Angletera).
Pablo Urib, tsianjery politika ranofotsiny. Efatra ambinifolo taona izao izy no nonina ivelan'i Kôlômbia ary, ho azy, resahana ny sancocho rehefa miresaka fahatsiarovana. Avy ao Medellín izy, sady avy ao Madrid koa. Sivy ambinifolo taona i Pablo raha nandao an'i Kôlômbia ary, amin'izao fotoana izao, olom-pirenena Espaniôla. Izay tsy misakana velively ny faniriany hamantatra izao tontolo izao. Ity tanora Kôlômbiana sady Espaniôla ity dia monina ao Bristol ankehitriny, toerana isaintsainany, tamin'ity tafatafa tao Medellin ity, ny hiaingàna, ny hiverenana ary ny hifamatorana aminà firenena iray sy tokana :
Vonona ny hiverina tany Kôlômbia aho, indrindra indrindra tany ampiandohan'ny fianarako tao Madrid, tena tsy nety tamiko ny fiheverana ny toerana misy ahy amin'ny maha-vahiny mpiavy ahy. Niaraka tamin'ny fotoana, lasa olom-pirenena espaniôla aho. Fa rehefa tonga amin'ny hoe hifindra monina fanindroany ianao, ny trano tena miraikitra ao an-tsainao sisa dia ilay iray farany izay vao avy nilaozanao. Ary dia tena latsaka anaty saritaka goavan'ny maha-ianao anao ianao.
Velombelomin'ity tanora mpahay politika ity ny fàka niaviany, amin'ny alalan'ny fifandraisany amin'ny fianakaviana sy ny namany. Ary avy amin'ny fintina omen'ireo tambajotra sosialy azy avy any ampitan'i Atlantika. Ankoatra izay, samy teboka lehibe ifantohany ihany koa ny Semana, El Espectador, La Otra Orilla sy La Silla Vacía, na dia noho ny politika fotsiny aza.
Na tsy nandao ny fireneny talohan'ny faha-19 taonany aza izy, nanana fotoana i Pablo nandraisana ny kitapo fibabiny sy nitetezana an'i Kôlômbia. Tany amin'ny faha-14 taonany izy no nanomboka, nanararaotra ny faran'ny herinandro na ireo andro tsy fiasàna, ary nanohy nandritry ny fialantsasatry ny mpianatra :
Nandritry ny taonan'ny fahatanorako no nitsidihako ny Morontsiraka Atlantika, nefa koa ny tendrombohitra, Cordillère any amin'ny faritra mpamokatra kafe, ny faritra rehetra manodidina an'i Medellin. Tafidina hatrany Bogotà aho ary nanohy nankany an-toerana hafa avy eo. Angamba noho i Kôlômbia tsy manana ireny toerana goavana natao hialàna voly ireny, toy ny Machu Pichu, ireo tanàna azteka rava ao Meksika na ny Perito Moreno any Arzantina. Nefa amin'ny ankapobeny, tena mahasarika izy. Ny singa tsirairay dia mitambatra manome zavatra iray manontolo izay ny mponina ao aminy no tena tsara indrindra.
Tantarain'i Pablo ihany koa fa angamba tamin'ny fotoanan'ny fahazazàny i Medellin no tena niaina ny vanim-potoana tena nihotakotaka indrindra, latsaka tao anatin'ny ady nateraky ny zava-mahadomelina :
Tany amin'ny taona 1980, ary hatramin'ny nahafatesan'i Pablo Escobar tamin'ny 1993, ilay mpanorina sady mpitarika ny fikambanan'ireo mpikirakira zava-mahadomelina ao Medellín, efa tafakatra mila ho in-droa amin'izay fantatra ankehitriny any amin'ireo tanàndehibe ao Amerika Afovoany ny tahan'ny vono olona. Ady mibaribary tanteraka tamin'izany.
Manazava moramora ny zavatra rehetra ao anaty tsikitsiky, tsaroan'i Pablo ny fomba nametrahan'ny sasany baomba teo akaikin'ny tranon'ny renibeny, ny fomba nahazatra azy nisaina hoe tsy hiverina avy any am-piasàny intsony ny rainy na ny fomba, rehefa lasa adolantsento, nidirany nangataka rano tao amina toeram-pisakafoanana iray ka nifanenàny taminà “guérilleros” telo mitam-piadiana eo ampilalaovana ‘billard’ :
Tsy matetika ianao no hifanatri-tava aminà lehilahy iray mitondra basilava eo ambony latabatra ‘billard’, saingy zavatra iray tsy nampahatahotra izany. Taty aoriana, eny. Nihasarotra ny raharaha taty aoriana ary misedra loza isak'izay mandeha mivoaka ny trano, ny loza no tanjona/lasibatra. Ankehitriny, apetrako miaraka aminà fomba fijery mankany aloha izany, ary heveriko fa ny fivezivezena irery ao anaty firenena iray dia zavatra iray tsy tokony nasaiko niaretan'ny reniko mihitsy.
Tsy azon'i Pablo, izay 33 taona ankehitriny, atao ny mamela handalo fotsiny ny fotoana ahafahany miresaka ny zavatra nataony tany Kôlômbia fony izy tena efa antomotry ny handeha :
Ny fiakaran'ireo elatra farany havanana, izay niatrika ny rehetra taminà kabary henjana niantsoany ny tahotra sy ny nasionalisma, dia nanome toerana kely ny fahazoana mitsikera.
Tamin'izay fotoana izay indrindra i Pablo no nahita sy nirotsaka tamin'ny politika, izay nitondra azy taty aoriana ho any Espaina mba hianatra ny Siansa Pôlitika:
Tany indray, tsy azo nialàna ny tsy hitankosenako tamin'ny zava-nisy ara-politika tao Kôlombia, ary ny fiainana izany avy lavitra, inoako fa mipetraka aminà toerana misy tombony manokana aho. Rehefa mahita ny toedraharaha avy ety lavitra sy rehefa manana lasitra ho ampitahaina aminy. Matetika aho izany no mifandona amin'i Kôlômbia. Ary na androany aza, mbola be ireo endriky ny fireneko izay tavela tokony mbola hihavanako.
Iverenan'i Pablo ny tsikera, na ny marimarina kokoa ny tsy fisian'izy io, ary apoitrany ny fanoherana ataon'ireo vondrona sasany amin'ny kiana, rehefa injay ampahany amin'ny maha-izy azy ireo no asiana resaka :
Raha firenena iray, finoana iray na fotokevitra iray no tsaratsaraina, dia lasa toy ny niharam-boina ka lasa hoe ratsy no fijery ny fanakianana. Izany no zava-nitranga tao Kôlômbia. Niharan'ny fitsaratsaràna azy ho firenena mampidi-doza ny firenena iray manontolo, ho firenen'ireo mpikirakira zava-mahadomelina. Araka izany, rehefa tonga i Álvaro Uribe [izay filoha taloha tao Kôlômbia ankehitriny] ary nanao kabary mitanila mankany amin'ny havanana, mivantambantana manoloana ireo kiana avy any ivelany, vetivety ny fiakaran'ny maripàna. Ary tsy dia nojerena loatra ireo izay tavela tany ivelany, tsy nitovy lanja tamin'izany ny fitsaràny ary nampangaina ho tsy miraharaha sy manana fijery mitanila izy. Indray andro, nisy mpanao gazety, tsy kôlômbiana, nanazava hoe i Medellin no tranon-dopy goavana indrindra manao tafo lanitra ety ambany masoandro. Tsapany tsara ny fantsy nianjera taminy.
Farany, zarain'i Pablo ny fandinihana iray tamin'ireo sary izay nomen'ny media nentin-drazana tamin'ny alàlan'ireo “narco-telenovelas” (tantaran'ny varotra rongony), karazana andian-tantara anaty fahitalavitra mifototra amin'ireo tantara mifamatotra amin'ny resaka fanondranana zava-mahadomelina, sy ny fomba nahavitan'ireo fandraisana andraikitra eny anivon'ny tontolon'ny zavakanto sy ny kolontsaina nanokatra sy nampanangatra ireo sary izay maneho an-dry zareo Kôlômbiana rahateo :
[Kanefa] Nianaranay ny niaina miaraka amin'ny fahasamihafàna. Ary na nanondrana andian-tantara miresaka zava-mahadomelina aza izahay, izay nandray anjara tamin'ny fitsaratsaràm-poana ny vahoaka na nanova zavatra sy nanilikilika vehivavy, betsaka olona manao zavatra tena tsara ao Kôlômbia amin'izao androntsika izao. Misy zavatra tena mahaliana ao anatin'ny tontolon'ny kolontsaina, ny taokanto ary ny mozika. Ny fampanarahana fenitra ny politika sisa, saingy tsy maintsy ho tonga izany.
Hevitra 1 herinandro izay
Fifidianana 2 herinandro izay